ဝကခုဆယမ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
နရပန်းခြံ၏အရှေ့ ဘက်စွန်းတွင်တည်ရှိသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၄၂ မီတာရှိသော တောင်။ ပြေပြစ်သောတောင်ကုန်းကိုဖုံးအုပ်ထားသော မြက်ခင်းသည် နော်ရှိဘဟု ခေါ်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာရှိသော မြက်ခင်းဖြစ်ပြီး တောထဲတွင်သမင်များလည်းရှိပြီး နွေဦးတွင် ဆာကူရာ၊ ဆောင်းဦးတွင် မိုမိဂျိ၊ ပုန်နရိတ်ပန်းများနှင့် ရာသီဥတုလေးခုလုံးတွင် သဘာဝတရားများကို ခံစားနိုင်ပါသည်။
Naraken'narashi Shibatsuji-chō 543( ပန်းခြံတာဝန်ခံရုံး)
မတ်လ တတိယပတ်စနေ မှ ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယမြောက် တနင်္လာ
နှစ်တိုင်း ဇန်နဝါရီလ စတုတ္ထမြောက် စနေတွင် တောင်မီးရှို့ ခြင်းကျင်းပပါသည်။ မြို့ ဟောင်း နရ၏ မနက်စောစောနွေဦးကို ဖော်ပြသော ရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ညကောင်းကင်ရှု့ ခင်းသည် အကောင်းဆုံး။ ထိုနေ့ တွင် တောင်မီးရှို့ ခြင်းများမလုပ်ခင်တွင် မီးရှုးမီးပန်းပစ်လွှတ်ခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
JR ခင်းတဲစွတ် (Naraဘူတာ) နရဘူတာမှ နရဘတ်စ်တိုKasugataisha hondenသို့ စီးပါ၊ (ဂိတ်ဆုံး)တွင်ဆင်းပြီး ၁၀ မိနစ်၊ တောင်ခြေအထိ လမ်းလျှောက်ပါက ၅ မိနစ်
JR ခင်းတဲစွတ် (Naraဘူတာ) မှ နရဘတ်စ်မြို့ တွင်းလှည့်လည်သောဘတ်စ်ကိုစီးပါ၊
(ရုပ်ပွားတော်ခဇုကတိုင်းအိချမအဲ) တွင်ဆင်းပြီး တောင်ခြေအထိ လမ်းလျှောက်ပါက ၁၀ မိနစ်
လည်ပတ်နေသောဘတ်စ်နရပန်းခြံလမ်းကြောင်းကိုစီးပါ၊ (တောင်ခြေ တောင်ဘက်ဂိတ်)တွင်ဆင်းပါ။
တောင်စောင်းမှာ ပေါများကျယ်ပြန့် တဲ့ ချာဘယာခင်းက ...
အမည်က ယာတဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်။ တရားဝင်ဘုရားကျောင်...
( မီးခိုးရောင် စက်မှုဇုန် ) ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်က အတိတ်က အရာဖြစ်တယ်။ ( စက်ရုံဆွဲဆောင်မှု ) ပြုလုပ်မယ့် လူတွေကို ပေါ်ထွက်လာစေတဲ့ ခါဝစခိမြို့ရှုခင်း `` စက်ရုံညရှုခင်း ```
ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ နေ့ စဉ်ဘဝထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့ အမှတ်မထင်နေရာနဲ့ ရှုခင်းတွေလည်း အနည်းငယ် ရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ပြီး ၊ ဆွဲဆောင်အားကောင်းလာပြီး စတိုင်ကျတဲ့ ( ရှုခင်းနေရာ ) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးလိုက်တ...
အဲဒိုခေတ်လိုပါဘဲ ! မြို့ဟောင်းလေးက လှပတဲ့ တည်းခိုမြို့ ၈ နေရာ လက်ရွေးစင်
လေယာဉ်ပျံ နဲ့ ကား စတာတွေ မရှိတဲ့ အဲဒိုခေတ်၊ စမ်းခင်းခိုးခေတ်တွေမှာ အဲဒိုနဲ့ ဒေသအသီးသီးကို သွားရောက်ကြတာက လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ မြင်းစီးခြင်းဖြင့် သွားကြရတာကလွဲပြီး မရှိပါဘူး။ ကျည်ဆန်ရထားဖြင့် တိုကျို...
ဟိုကိုင်းဒိုး ဘိအဲအိ (ရေကန်ပြာ) Mac၏ မျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံတွင် သုံးထားသော အပြာရင့်ရောင် ရှု့ ခင်း
ယခုတစ်ကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးမှာက ဟိုကိုင်းဒိုးခမိဂဝအုပ်စု ဘိအဲအိချော ရှိရာဂနဲတွင်ရှိသော (ရေကန်ပြာ) ပန်းသီးMac တွင် မျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံအဖြစ်သုံးထားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ထင်ရှားသောရှု့ ခင်းဖြစ်ပါသည်။ ...
( စက်ဘီးဖြင့် ကျွန်းတစ်ပတ် ! ) အနုပညာမြောက်တဲ့ကျွန်း ( နအိုကျွန်း ) မှာဆက်ဆက်လည်ပတ်ချင်တဲ့စံပြနေရာ ၇ ခု
ZEKKEI JAPAN တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့ ရဲ့ အိချိခါဝဖြစ်တယ်။ နေ့ စဉ် ဂျပန်ရဲ့ ရှုခင်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးနေပြီး သီးသန့် အနေနဲ့မျှော်လင့်နေတဲ့ရှုခင်းကို ရှာဖွေဖို့ ခဏခဏ ခရီးထွက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုးဖြစ်တဲ...